ပူတင်နှင့် ဘိုင်ဒန်တို့ မော်စကို၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်များကို နှစ်ကုန်ပိုင်း တယ်လီဖုန်းပြောကြားမှုတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ - Xinhua News Agency
ပူတင်နှင့် ဘိုင်ဒန်တို့ မော်စကို၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်များကို နှစ်ကုန်ပိုင်း တယ်လီဖုန်းပြောကြားမှုတွင် ဆွေးနွေးခဲ့
ပုံစာ- အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် (ဝဲ) နှင့် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်တို့သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့ရှိ Villa La Grange ၌၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၆ ရက်က တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် (ဓာတ်ပုံ-Denis Balibouse/Pool via Xinhua)
မော်စကို၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် (Vladimir Putin) နှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် (Joe Biden ) တို့သည် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားမှုအတွင်း ရုရှား၏ လတ်တလော လုံခြုံရေး အဆိုပြုချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ကရင်မလင်နန်းတော်က ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးသည် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က ၎င်းတို့၏ ယခင်ဆွေးနွေးပွဲများအတွင်း ရရှိခဲ့သော သဘောတူညီချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ ရုရှားနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို အာမခံရန် ရည်ရွယ်သည့် တရားဥပဒေ အာမခံချက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုများ စတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ပါဝင်ကြောင်း” ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရုရှားနှင့် အမေရိကန်တို့ကြား လုံခြုံရေးစာချုပ်မူကြမ်း၏ နောက်ကွယ်ရှိ အခြေခံမူများနှင့် ရုရှားနှင့် မြောက်အတ္တလန္တိတ် စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများအဖွဲ့ (NATO) တို့ကြား သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို ပူတင်က ရှင်းပြခဲ့သည်။
ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှု၏ရလဒ်သည် နေတိုး၏အရှေ့ဘက်သို့ တိုးချဲ့မှုနှင့် ရုရှားနယ်စပ်များအနီးတွင် မဟာမိတ်၏ လက်နက်စနစ်များ ဖြန့်ကျက်ခြင်းတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် ဥပဒေကြောင်းအရ အာမခံချက်ပေးထားသင့်ကြောင်း ကြေညာချက်၌ အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။
ပူတင်နှင့်ဘိုင်ဒန်တို့သည် အဆိုပါကိစ္စရပ်များအတွက် လေးနက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အရေးပါသည့် ဆွေးနွေးမှုကို သဘောတူညီခဲ့ကြပြီး လာမည့် မော်စကိုနှင့် ဝါရှင်တန်ကြား လုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ပုံစံသုံးမျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
ပထမအကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၂ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်မှ ၁၀ ရက်တွင်ဂျီနီဗာမြို့၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် နေတိုး-ရုရှားကောင်စီ၏ မူဘောင်အတွင်းနှင့် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်၌ ဥရောပရှိ လုံခြုံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့အတွင်း ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရုရှားနှင့် အမေရိကန်တို့သည် ဥရောပနှင့် ကမ္ဘာကြီးတွင် တည်ငြိမ်မှု ရှိစေရန်အတွက် အထူး တာဝန်ရှိကြောင်း မှတ်ယူထားကြောင်းနှင့် အမေရိကန်အနေဖြင့် ယူကရိန်းတွင် ထိုးစစ်ဆင်လက်နက်ချထားမှုများကို ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဘိုင်ဒန်က အာမခံခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ အရှိန်မြှင့်လာဖွယ်ရှိခြင်းသည် “စိုးရိမ်ဖွယ်အမှား” ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အဓိကအားဖြင့် “ရုရှား-အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှု” ဆီ ဦးတည်နိုင်ကြောင်း ပူတင်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
သမ္မတနှစ်ဦးလုံးသည် လာမည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများအားလုံးကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနှင့် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်မှုကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူခဲ့သည်။
“ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ တယ်လီဖုန်းပြောဆိုမှုက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ လေးနက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်” ဟု ကရင်မလင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။ (Xinhua)
MOSCOW, Dec. 31 (Xinhua) — Russian President Vladimir Putin and his U.S. counterpart Joe Biden discussed Russia’s recent security proposals during their telephone call, the Kremlin said Friday.
“In general, the conversation was frank and businesslike. It was useful to both parties,” the Kremlin statement added. Enditem
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ၌ တရုတ်မှ ထောက်ပံ့တည်ဆောက်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦ ပြီးစီး